‘मकै स्टेसन’ बन्यो राधानगर- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
‘मकै स्टेसन’ बन्यो राधानगर
‘यात्रा गर्नेहरु र स्थानीयले गर्दा हाम्रो गुजारा चलेको छ । आम्दानी चित्तबुझ्दो छ ।’
पुस १४, २०७८ सुम्निमा चाम्लिङ
इटहरी — कानेपोखरी जंगलको बीचमा मकै पोल्ने र खानेको लस्कर देख्न पाइन्छ । दाउराको धूवाँले ढाकिएको ठाउँमा मकै खान जो कोही लोभिन्छन् । बेलबारीस्थित राधानगर यतिबेला मकै स्टेसनका रूपमा परिचित भएको छ ।
यात्रुका लागि थकाइ मार्ने र भोक मोट्ने थलो बन्दै गएको छ । शीतल छहारीमा बसेर मकै खानुको स्वाद लिन टाढाबाट समेत आउने गर्छन् ।
यस क्षेत्रमा मकै पोल्न थालेको पहिलो लकडाउनदेखि मात्र हो । सुरुमा यस स्थानमा स्थानीयले फाटफुट निगुरो बेच्ने गर्थे । सडकदेखि तल्लो साइड गहिरो थियो । व्यापारीहरूले रकम संकलन गरेर गिट्टी, ढुंगा हालेर राधानगर मकै स्टेसन बसाएका हुन् । अहिले भने स्थानीयले उत्पादन गरेको सागसब्जी, फलफूलसमेत बेच्ने स्थान भएको छ । यहाँ बिहान ५ बजेदेखि साँझसम्म मकै खानेको चहलपहल हुन्छ ।
बेलबारी नगरपालिका १० निवासी रामबहादुर जोगी सुरुमा निगुर बेच्थे । दुई वर्षदेखी भने मकै पोल्न थालेका छन् । लकडाउन सुरु हुनुभन्दा पहिले घरको काममा समय बित्ने गर्थ्यो । आम्दानीको हिसाबले निगुरोभन्दा राम्रो हुने भएकाले यही पेसा रोजेका हुन् । लकडाउनले आम्दानीको स्रोत ठप्प भएपछि विकल्पमा यो पेसा अँगालेका हुन् । बिहान ७ बजेदेखि साँझसम्म उनी मकै पोल्ने गर्छन् ।
४९ वर्षीय खिलबहादुर बस्नेतले मकै पोल्न थालेको एक वर्ष भयो । सुरुमा उनीसमेत जोगीले जस्तै व्यापारीहरूलाई मकै पुर्‍याउन आउर्थे । तर उधारोमा बिक्री गर्नुपर्दा पन्ध्र हजार रुपैयाँ डुब्यो । लगानी उठाउन नसक्दा खसी बेचेर साहुलाई क्रण तिरे । गरिरहेको व्यापार चटक्क छाड्न मन मानेन । अनि आगोले पोलेको घाउ, आगोले नै सेकाउँदा हुन्छ अरे भन्ने पुर्खाको भनाइलाई सम्झे । उनले त्यही स्थानमा मकै पोल्न थाले । एक सय वटा मकैबाट सुरुवात गरेका थिए । ‘सुरुमा १ सय वटा मकै बेच्दा ३ हजार पैसा बनाए,’ उनले भने, ‘उधारोमा मकै बेच्नुभन्दा दिनभरि मकै पोल्दा राम्रो भयो ।’ उनी मकै पोलेर मासिक मुनाफा मात्र ३० हजारदेखि ३५ हजारसम्म कमाउने गर्छन् ।
मुनाफा सँगै समाजको सेवामुखी काम गर्न पाएको बस्नेत निकै खुसी छन् । उनी भन्छन्, ‘सुन किनेर पितलमा बेच्ने ठाउँ थियो । यो ठाउँमा यसरी कमाइ होला भन्ने लागेको थिएन ।’ मकै ओसारपसारका लागि सिटी सफारी खरिद गरेका छन् । ४० वर्षीया अन्जना बस्नेत भाउन्नेको थापा चोकमा होटल सञ्चालन गर्थीन् ।
अहिले उनी काचो र पोलेको गरी दैनिक १ सय ५० वटा मकै बेच्ने गरेकी छन् । दैनिक आठ सय रुपैयाँ नाफा हुन्छ । सिटी सफारीबाट मकै ल्याउँदा दैनिक भाडा ६ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । खर्च कटाएर भए पनि आम्दानी हुने उनी बताउँछिन् । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका बेलबारी १० का मित्रबहादुर बस्नेत घर बनाउने काम गर्थे । सामान्य आम्दानी थियो, एक्लो ज्यान चलेको थियो । लकडाउन सुरु भएदेखि काम रोकियो । घरखर्च जुटाउनका लागि साइकलमा सागसब्जी राखेर बेच्थे । यही क्रममा उनले किसानसँग मकै ठेक्का गरेर व्यापारीलाई दिन थाले । उधारो बढी जाने भएकाले तिन वर्षदेखि आफैं मकै पोल्न सुरु गरे । जंगलबाट दाउरा ल्याएर अधिकांश व्यापारीले पोल्ने गर्छन् । सुगर र प्रेसरको बिरामी मकै खानका लागि टाढाबाट समेत आउँछन् ।
लकडाउनले मकै पोल्न सिकाएको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘यात्रा गर्नेहरू र स्थानीयले गर्दा हाम्रो गुजारा चलेको छ । आम्दानी चित बुझ्दो छ ।’ साताको शनिबार अरू बेलाभन्दा दोब्बर भीडभाड हुने गर्छ । नाफा मात्र दैनिक ९ सय रुपैयाँ बचाउँछन् । झापा बिर्तामोडका डिल्लीराम दाहाल भाउन्नेसम्मको यात्रामा थिए । बाटोमा मकै पोलेको देखेपछि मन मानेन । ओर्लेर परिवारको साथ ूजंगलबीचमा बसेर मकै आए । जंगलमा बसेर खादा आरामका साथ रमाइलो लागेको उनी बताउँछन् । लक्ष्मीमार्गका भूपू भारतीय सेना देशराज चाम्लिङ राईले तीन कट्ठामा पोल्ने मकै खेती लगाएका छन् । अवकाशपछि उनले चार वर्ष धान, दाल र माछापालन गरे । चार वर्षदेखि पोलिखाने मकै रोप्दै आएका छन् ।
उनी भन्छन्, ‘दाल रोप्नुभन्दा मकै रोप्दा अत्यधिक राम्रो हुन्छ । चार वर्षदेखि मकैले राम्रो भाउ पाएको छ ।’ पुस पहिलो साता निस्केको मकैले राम्रो भाउ पाइने उनले बताए । मकैलाई औषधिका रूपमा खाने भएकाले काँचो मकै लिन गाउँमै ग्राहक आउने गरेका छन् । भाउन्ने र लक्ष्मीमार्गमा उत्पादन भएको मकै केही वर्षअघिसम्म जोगबनी, धरान, इटहरी जाने गर्थ्यो । राधानगरमा मकै पोल्न थालेपछि बजारको समस्या छैन ।
प्रकाशित : पुस १४, २०७८ १२:०९
चित्रमा माओवादीको ‘समाजवादी यात्रा’
काठमाडौँ — विद्रोह थाल्दा अगुवाले देखाएका सपना र शान्ति प्रक्रियापछि पार्टीको धरातललाई नेता–कार्यकर्ता आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्छन् । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेकपा माओवादी अधिकांश समय सत्तामा छ । तर कति सन्तुष्ट देखिन्छ ? के सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिनुको उद्देश्य पूरा भएकै हो ? राजधानीमा जारी माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनमा बहस चलिरहेको छ । पार्टीले उठाएका समाजवादको मुद्दा बितेका डेढ दशकमा जीवितै छन्/छैनन् ? श्रमिक तथा सीमान्तकृत वर्ग कता छन् ? ‘जनयुद्ध’ मा होमिएकाहरू को थिए ? आदि प्रश्नको समीक्षा कलाकर्मीहरूले भने चित्रमा गरेका छन् ।
अखिल नेपाल ललितकला संघले महाधिवेशनस्थल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कला प्रदर्शनी गरेको हो । प्रदर्शनीमा ‘समाजवादी यात्रा’ शीर्षकमा करिब दुई दर्जन कलाकारका कलाकृति छन् । प्रदर्शनीमा आन्दोलन, गणतन्त्र, श्रम, मजदुर, वित्तीय पुँजीवाद र त्यसको असर, कृषि तथा औद्योगिक क्रान्ति, सामाजिक न्याय र विभेदरहित समाजको परिकल्पना कलाकृतिमा छ ।
अग्रज कलाकार जुलुमलाल चित्रकारले गरिबीको विषयमा बनाएको चित्रमा मुलुकको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन समाजवादी दिशामा अग्रसर हुनुपर्ने विचार अभिव्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै अर्का अग्रज नारदमणि हार्तम्छालीले गणतन्त्र ल्याउन गरिएका संघर्ष र सामन्तवादी परिवेशले समाजमा पारेको प्रभावलाई कलामा चित्रण गरेका छन् । चित्रमा प्रतिक्रियावादी शक्तिले लगाएको गिद्धे दृष्टि इंगित छ ।
प्रदर्शनीमा परम्परागत थाङ्का तथा पौभा शैलीमा समाज परिवर्तन र सामाजिक न्यायको समसामयिक विषयलाई समेत कलात्मक रूपमा चित्रण गरिएको छ । अग्रज थाङ्का कलाकार लालमान लामाले ‘उज्यालो यात्रा’ नेपालको वर्गसंघर्ष या अन्य राष्ट्रभक्तिका आन्दोलन र युद्धमा नारीको सहभागिता र उनीहरूको योगदानको विषयलाई समेत चित्रमा उतार्ने कोसिस गरेका छन् । ‘नालापानी युद्धदेखि माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धमा महिलाको विशिष्ट र बहादुरीपूर्ण योगदान छ । मैले चित्रमा त्यो प्रसंगलाई उतार्ने जमर्को गरेको छु,’ लामाले भने ।
पौभा शैलीमा राजनीतिक तथा सामाजिक विषयमा कलाकार राजकुमार राना मगर, अमिर शाक्यले निकै आकर्षक चित्र बनाएका छन् । उनीहरूका कलामा मजदुर, किसान, न्यायपूर्ण आन्दोलन र समानताका विषयलाई निकै बोधगम्य रूपमा उतारिएको छ । कलाकार राजकुमार रानाले नेपालीको एक दिनको ज्याला दस हजार भएको परिकल्पना गरेको चित्र प्रदर्शनीमा देख्न सकिन्छ । कलाकार रवीन्द्र श्रेष्ठले बनाएको विद्रोही लडाकु र नेपाली सेनाको चित्रले शान्ति समायोजनको विषयलाई कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । शान्ति प्रक्रियापछि समाजले समृद्धिको यात्रामा फड्को मार्ने भएकाले त्यस दिशामा अग्रसर हुन उनले दलहरूलाई आग्रहसमेत चित्रमार्फत गरेका छन् ।
संघका केन्द्रीय अध्यक्ष पाल्साङ्मो लामाले पार्टीको महाधिवेशनको सन्दर्भमा गरिएको कला प्रदर्शनीले नेपाली समाजको बहुआयामिकतालाई कलात्मक रूपमा उतारेको बताए । उनले भने, ‘नेपालको परिवर्तनकारी आन्दोलनमा माओवादी आन्दोलनको विशिष्ट भूमिका रहेकाले त्यसको झलक कलाकृतिमा आएको छ ।’
नेपालको प्रगतिशील तथा समाजवादी कला आन्दोलनका लागि यो प्रदर्शनी कोसेढुंगा सावित हुने कलाकर्मीहरूको विश्वास छ । प्रदर्शनीमा एससी सुमन, देवेन्द्र थुम्केली, कमानसिंह लामा, प्रदीप अधिकारी, लीलाधर केसी, अमर परियार, अमिर शाक्य, निरीमाया लामालगायत कलाकारहरूका तीन दर्जनभन्दा बढी कलाकृति राखिएका छन् ।